Waxaa lagu asaasay nimcada, Kaniisada aduunka ee Switzerland (WKG)
Islaamku wuxuu ballanqaaday janno - nolol weligeed ah oo ka buuxdo qanacsanaanta dareenka iyo raaxada. Si uu halkaa u yimaado, qofka rumaysta ahi waa inuu adeecaa qodobbada caqiidada iyo shanta tiir ee Islaamka. Ku noolaanshaha nolol wanaagsan iyo ku-dheganaanta caadooyinka waxay Yuhuudda u horseedda nolosha weligeed ah oo ay la jirto Masiixa. Kuwani midkoodna ma badbaadin karo trailer-ka. Had iyo jeer wax weyn ayaa jira haddii - haddii aad raacdid xeerarka, abaalmarintaaga waad heli doontaa. Waxaa jira hal “diimeed” oo dammaanad qaadi kara natiijo wanaagsan geerida ka dib isla mar ahaantaana ay kujirto abaalmarin camal wanaagsan ama qaab nololeed sax ah. Masiixiyaddu waa diinta kaliya ee ballan qaada oo badbaadisa nimcada Eebbe. Ciise waa kan keliya ee aan ku soo rogaynin shuruudo ku saabsan badbaadada marka laga reebo rumaynta isaga inuu yahay Wiilka Ilaah ee u dhintay dembiyada dunida.
Oo sidaas daraaddeed waxaan u nimid bartamaha xudunta iskutallaabta dusheeda "Aqoonsiga Masiixa". Shaqada Masiixa, oo ah shaqada madax furashada, laguna bedelay shaqadii dadku, waa nimco, oo bartanta u ah iimaankeenna. Nimcada Ilaah waxaa naloo siiyay hadiyad ahaan, sida nimco gaar ah ee ma aha sida abaalmarinta wixii aan qabanay. Waxaan tusaale u nahay hodantinimada cajiibka ah ee nimcada Ilaah iyo wanaaggiisa uu inagu muujiyey, sida ay ku caddahay wax walba oo uu inoogu sameeyey xagga Ciise Masiix (Efesos 2).
Laakiin taasi waxay umuuqan kartaa mid aad u fudud. Waxaan had iyo jeer rabnaa inaan ogaano "waa maxay qabashadu"? Miyaanay ahayn inaan wax kale qabanno? 2.000kii sano ee la soo dhaafay, nimcada ayaa si qaldan loo fahmay, loo adeegsaday, dad badanina waxbadan ayay ku soo kordhiyeen. Sababtoo ah jahwareerka iyo shakiga laga qabo badbaadada nimcada inay aad ufiican tahay run, sharciga ayaa koraya. Waxay soo baxday bilowgii [Masiixiga]. Bawlos wuxuu siiyay Galatiya xoogaa talo ah oo ku saabsan arrintan. «Dhammaan kuwa doonaya in si wanaagsan jidhka loo fiirsado waxay u baahan yihiin in laydin gudo, si aan loogu silcin xagga iskutallaabta Masiixa aawadeed. (Galatiya 6,12).
Annagoo ah rumaystayaasha Ciise Badbaadiyeheenna ah, waxaan ku hoos jirnaa nimco, sharciga ka hooseeya (Rooma 6,14 iyo Efesos 2,8). Waa nimco inaad ka madax banaanaato taayirrada iyo caqabadaha. Waxaan ognahay in dembiyadeenna iyo dabeecadaha dembiga ah mar walba lagu daboolayo nimcada Ilaah. Uma baahnin inaan sameyno bandhig, Ilaahey uma baahna inaan kasbano badbaadadeenna. Dhammaan wadiiqooyinka oo dhami Ilaah bay u horseedaan? Waxaa jira wadooyin badan, laakiin hal waddo oo keliya - oo waxay ku saleysan tahay nimco.